तिम्रो यादमा | मझेरी डट कम
editor — Sun, 04/30/2017 - 16:51
दीपेन्द्र चन्द ठकुरी
जब घाम लाग्छ म तिमीलाई खोजिराको हुन्छ
जब जुन पर्छ म तिमीलाई खोजिराको हुन्छु ।
यो माया प्रेम पनि यस्तै रहेछ - जब साथमा हुन्छौं तब कल झगडा । एउटा सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाएर हामी एकअर्कालाई गलीगलैज गर्छौं । जब ढाटा हुन्छौं हामीहरू आफ्नो गल्तीलाई मान्छौ । संन्सारमा माया प्रेम भने यस्तै रहेछ । एउटा परीले मेरो मन मुटु चोरेर लगिन्, अहिले उनकै यादले मलाई तड्पाउदैछ ।
उनको र मेरो भेट भएको करिब तीन वर्ष जति भो । अचानक हामीहरू एउटा फोनको माध्यमले नजिक हुन्नु पुग्यौं । एक दिन हामीहरुले भेटने प्रयास गर्यौं । भेट हुँदाको पल एकदमै निरास र खुसी पनि थियो । फोनमा त हामीहरू खुलेर कुराकानी गर्थ्यौं तर जब भेट भयो हामी एक अर्काको मुखमा हेर्दै रह्यौं । आखिरमा मैले हिक्मत जुटाएर भनें, "अनि सन्चै ?" उनको उत्तर आयो,"हजुर ।"
त्यसपछि हामीहरू पार्कतिर लाग्यौं । पार्कमा एकदुई घन्ढा आ-आफ्नो घरगाउँको कुरा गर्दै बितायौं । पहिलो चोटीनै थियो मेरो कुनै केटीसँग पार्कतिर घुमेको । कतै डर पनि लाग्थ्यो कुनै मेरो आफन्तहरुले देख्छ कि भनेर । बिस्तारै समय पनि ढल्किंदै गयो । त्यो पार्कको सम्झनामा हामीले केही तस्बिरहरू आ-आफ्नो फोनमा कैदै गर्यौं । अनि पार्कबाट बहिर आइसकेपछि केही खाउँ भनेर होटलतिर लाग्यौं । होटमा खाना खाँदाको पल अलग्गै थियो । जोडी भएका केटाकेटी मात्र त्यो होटलमा बढी आउने रहेछन् । म धेरै लजालु स्वभावको भएकालेसँगै बस्नुमा पनि साह्रै गहारो लागिराखेको थियो । केही आँट गर्रेरसँगै बस्यो ।
पहिलो चोटी नै थियो मेरो कुनै केटीसगँ एकै कुर्सीमा बसेको । केही छिनमै खाना पनि आयो, हामी खाना खान लाग्यौं । उनी मलाई हेर्दै मुस्कुराउदै थिइन् । म पनि बाहिरी मनले मुस्कान दिने प्रयास गर्दै थिएँ ।
होटलको वातावरण मलाई ठिक लागेको थिएन । त्यहाँ भएका केटाकेटीको अनुशासन धेरै नराम्रो थियो । खाइसकेपछि हामी होटल बाहिर आयौ । छुट्टिने समय पनि आइपुगिसकेको थियो । हामी एक अर्काको मुखमा हेर्दै गयौं । दुवैको अनुहारमा निरास झल्किराको थियो । हामी दुइटै चाहन्थ्यौं कि केही पलहरू साथमा बिताउनु । तर समयले कहाँ मान्थ्यो र !
अन्तिममा हामीहरू आँट गर्रेर छुट्टियौं । बाटोभरि ती तस्बिरहरुलाई हेर्दाहेर्दै कोठासम्म आइपुगें । ती तस्बिरहरुलाई आफ्नो आँखामा उतार्दै निदाएछु । उनीले मध्यरातमा फोन गरेकी रहिछन । म त मस्त निदाएको रहेछु, फोन आएको पत्तै पाइन । बिहानीमा फोन हेर्दा खेरी मिसकल देखें अनि फोन लगाएँ । ऊ त हेलो भन्नुको साटो रुँदै थिइन् । मैले सोधें, "किन रुँदै हो नि ? के भो र तिमीलाई ?"
उनको एउटै उत्तर आयो, "तपाईं कति निष्ठुरी ! एउटा फोन पनि गर्नु भएन, अनि फोन पनि उठाउनु भएन ।"
मैले मुस्कुराउँदै उत्तर दिएँ, "तिम्रो तस्वीर हेर्दाहेर्दै बेहोस भएर निदाएछु ।"
प्रकाश छर्ने जून बने पो राम्रो
गैरी खेतको शीरै हान्यो